Daadinta ayaa muujineysa inay jiri doonto OnePlus 6T oo leh 5G | Androidsis
Noocyo badan oo Android ah ayaa isku diyaarinaya inay soo saaraan taleefannadooda casriga ah ee 5G. Samsung wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee leh nooc ka mid ah Galaxy S10, taas oo horeyba u gaadhay guga dukaamada. Sidoo kale waa kiiska Xiaomi, oo leh MI MIX 3 5G, oo aan ku arki karnay gudaha MWC 2019. In kasta oo calaamadahani aysan noqon doonin kuwa kaliya. Tan iyo markii la yidhi waxaan filan karnaa nooca 5G ee OnePlus 6T.
Tani waa waxa la soo daadiyay saacadihii la soo dhaafay. In kasta oo ay noqon lahayd xeelad halkii la yaab leh. Sababtoo ah OnePlus 6T kani waa la iibinayay dhowr bilood hadda, isagoo xitaa lahaa daabacaad gaar ah, daabacaadda MacLaren. Marka ma ogin haddii ay macno samaynayso in nooca 5G ka mid ah la helo.
Inkasta oo bilo taas Waxaa la sheegay in nooca Shiinaha uu soo saari doono taleefan casri ah oo 5G ah gudaha rubucii labaad ee sanadkan. Laakiin xilligan, shirkaddu ma aysan xaqiijin waqti kasta taleefanka uu noqon doono midka heli doona taageeradan. In kasta oo loo maleynayay inay noqon doonto dhammaadkeeda xiga ee soo socda, halkii laga ahaan lahaa OnePlus 6T.
Marka waa inaan ku qasban nahay sug xaqiijin dheeri ah. Inkasta oo ay macquul tahay in sumcadda ay haddaba ka shaqeyneyso moodal leh 5G, in la soo bandhigo xilli ka mid ah sannadkan, waa wax la yaab leh Maaddaama qaabkani suuqa ku jiray illaa lix bilood, markaa processor-kiisa waa la beddeli lahaa. Sida Xiaomi ay ku sameysay kiiskaaga.
In kasta oo waxa cad ay tahay inaan aragno sida noocyada ku yaal Android waxay ku biirayaan 5G craze. Markaa in nooca Shiinaha sidoo kale horeyba u lahaan doono moodallo iswaafaqsan. Waxa aynaan ogayn ayaa ah inay ugu dambayntii noqon doonto midkan OnePlus 6T ama haddii aan ka filan karno taleefan kale oo casri ah isaga.
Tani waa daadasho, taas oo ay tahay inaan ula dhaqanno sidaas oo kale. Sidaa darteed waxaan rajeyneynaa inay dhowaan soo bixi doonaan warar intaas ka badan. Si aan u ogaanno haddii aan run ahaantii ma jiri doono ama ma jiri doono nooc ka mid ah barnaamijkaaga OnePlus 6T 5G waafaqsan. Sidee u aragtaa sii deyntaan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Waxaa jiri kara OnePlus 6T oo leh 5G